အထင်ကရ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းပုံစံ မိတ်ဆက်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့သိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း မည်သည့်တွန်းအား (အတက်)မဆို၏ စတုတ္ထမြောက်လှိုင်းသည် ပထမလှိုင်း၏ အဆုံးမှတ်ကို အစွန်းချင်းထပ်မနေရပါ။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အတက်လှိုင်းရှိရန်မျှော်လင့်ကြသည့်အခါ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်ခြင်း ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ထိုအခြေအနေတွင် ကိုက်ညီမည့် Elliott လှိုင်းပုံစံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သာ ပထမနှင့် လေးခုမြောက်လှိုင်းကြားရှိ ထပ်ခြင်းနှင့်အတူ အတက်ကိုဆက်လက်ရေတွက်သင့်သည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။
လှိုင်းတစ် (သို့) ငါးအား အတက်အဖြစ် ဖြစ်ပေါ်ရန်မျှော်လင့်ပေမယ့်၊ ဇယားပေါ်တွင် လှိုင်းတစ်နှင့် လေးများကြား တစ်ခုနှင့်တစ်ခုထပ်နေသော ၅-လှိုင်းဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှုကို မြင်ပါက၊ အခြေအနေအတော်များများတွင် အထင်ကရ (ဦးဆောင်) ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း (သို့) အဆုံးသတ်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းရှိမည့် ကာလတစ်ခုရှိပါလိမ့်မည်။ ဤပုံစံနှစ်ခုကြား ကွာခြားချက်ကဘာတွေလဲ?
ဒါဟာလွယ်ပါတယ်။ အထင်ကရ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် အတက်တွန်းအားတစ်ခု၏ လှိုင်း ၁ (သို့) zigzag၏ လှိုင်း Aတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ရိုးရိုးပြောရရပါမူ၊ အထင်ကရထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် အတက် (သို့) zigzag၏ အစပိုင်းဖြစ်သည်။
တချိန်တည်းမှာပဲ၊ အဆုံးသတ်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် လှိုင်း ၅ (သို့) Cတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် အထင်ကရထောင့်ဖြတ်မျဉ်းအကြောင်း ပိုမိုရှာတွေ့ရမည်။
- ဤပုံစံအား လှိုင်း၅ခုအဖြစ် ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ဆင့်ပိုင်းခြား သည်။
- လှိုင်း ၂သည် လှိုင်း ၁ အစမှတ်ကိုကျော်ပြီး ဘယ်တော့မှဆုံးလေ့မရှိပါ။
- လှိုင်း ၃သည် လှိုင်း ၁၏ အဆုံးမှတ်ကို အမြဲချိုးဖောက်ပါသည်။
- လှိုင်း ၄သည် လှိုင်း ၁၏ အဆုံးမှတ်ကိုကျော်ပြီး အမြဲလိုလို ချိုးဖောက်လေ့ရှိသည်။
- အခြေအနေများ၏ ပကတိအများစု လှိုင်း ၅သည် လှိုင်း ၃၏ အဆုံးမှတ်ကို ချိုးဖောက်ပါသည်။
- လှိုင်း ၃သည် အတိုဆုံးမဖြစ်နိုင်ပါ။
- လှိုင်း ၂သည် တြိဂံ (သို့) သုံးဆသုံးဖွဲ့စည်းပုံ မဖြစ်နိုင်ပါ။
- လှိုင်း ၁၊ ၃ နှင့် ၅သည် အတက်တွန်းအား (သို့) zigzagများကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါစည်းမျဉ်းများတွင် တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ဦးဆောင်(အထင်ကရ) ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း၏ ရွေ့လျှားတတ်သောလှိုင်းများအား အတက် (သို့) zigzagများအဖြစ် ရှိနိုင်ပါသည်။ Zigzagများသည် ပိုပြီးတွေ့နေကြဖြစ်ပြီး၊ အထင်ကရ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံသည် ၃-၃-၃-၃-၃ကဲ့သို့ တူသော်လည်း၊ အတက်တွန်းအားတွင်ရှိသည့် တူညီသောပုံစံရှိပြီးဖြစ်သော မတူညီသောပုံသဏ္ဍာန် ၅-၃-၅-၃-၅နှင့်အတူလည်း ဤပုံစံရှိနိုင်ပါသည်။
အထင်ကရထောင့်ဖြတ်မျဉ်း ၂မျိုးရှိပါသည်: ကျုံ့ခြင်း နှင့် ချဲ့ခြင်း။ အခြေအနေအတော်များများတွင်၊ ကျဉ်းမြောင်းလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခု၏ ပထမလှိုင်းသည် အရှည်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ နောက်ပါတတိယလှိုင်းသည် ပထမလှိုင်းထက်ပိုသေးငယ်ပါသည်။ ပဉ္စမလှိုင်းသည်၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ လှိုင်းတစ်နှင့် သုံးထက်သေးငယ်ပါသည်။ သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျဉ်းလာသောဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းအား အရှည်ဆုံးတတိယလှိုင်းနှင့် ကြုံရနိုင်ပါသည်။
ပြန့်ကားလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခု၏ ရွေ့လျှားလှိုင်းတစ်ခုစီသည် ယခင်တစ်ခုထက် ပိုရှည်တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဤပုံစံ၏တတိယလှိုင်းသည် ပထမလှိုင်းထက်ရှည်ပြီးနှင့် ပဉ္စမလှိုင်းသည် တတိယလှိုင်းထက်ရှည်သည်။ ပြန့်ကားလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် ကျဉ်းလာသောတစ်ခုထက် ပိုအန္တရာယ်များသည်ဟု ယူဆခြင်းဖြစ်သည်။
အောက်ပါဇယားတွင် ပုံစံအား ဖွဲ့စည်းပုံ ၃-၃-၃-၃-၃ကဲ့သို့မြင်တွေ့နိုင်သည့်အတွက် လှိုင်းအားလုံးသည် zigzagကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
နောက်ထပ်ဇယားသည် အထင်ကရ ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းအား ၅-၃-၅-၃-၅ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြင့် တင်ဆက်ပြသသည့်အတွက်၊ ရွေ့လျှားတတ်သော လှိုင်းများ (၁၊ ၃ နှင့် ၅) သည် တွန်းအား(အတက်)များဖြစ်ပြီး၊ အမှားမှအမှန်သို့ရောက်လာသော လှိုင်းများ (၂ နှင့် ၄)သည် zigzagများဖြစ်သည်။
အောက်ပါဇယားတွင် သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ယင်းတွင် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း ၃ခုရှိသည်။ ရှေးဦးစွာ၊ ပြန့်ကားလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုသည် လှိုင်း ၁ရှိ အခြားဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း၏ ((i))၏ လှိုင်း (a)အဖြစ်သာ ပေါ်ထွက်လာပါသည်။
လှိုင်း ၁ရှိ ကျဉ်းလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း၏ ရွေ့လျှားလှိုင်းများတွင် zigzag ၂ခုနှင့် လှိုင်း ((iii))တွင် zigzag အစုံလိုက်တစ်ခုပါဝင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခုဆိုရင် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခု၏ ရွေ့လျှားလှိုင်းများ၏ နေရာတစ်ခုတွင် zigzagတစ်ခုထက် ပိုရှုပ်ထွေးသောတစ်စုံတစ်ရာရှိရန် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သင်သိပြီးဖြစ်သည်။
လှိုင်း ((a))ရှိ နောက်ထပ်ကျဉ်းမြောင်းလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် zigzagအဖြစ် ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည့် လှိုင်း ၂ကိုစုစည်းပေးထားပါသည်။
ဤသာဓကသည် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုသည် အတက်တွန်းအားလှိုင်းအသစ်တစ်ခု၏ အစ (လှိုင်း၁ရှိ ပုံစံကဲ့သို့)ဖြစ်နိုင်ပြီး သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုအထဲသို့ ပထမခြေလှမ်း (၂၏ လှိုင်း((a)) ကိုကြည့်ပါ) ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းအထဲတွင် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများရှိနိုင်ပါသေးသည် ( ((i))၏ လှိုင်း (a) ကိုကြည့်ပါ)။
ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုတွင် zigzagများပါရှိပါက၊ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်သင့်ပါသည်။ ဘာကြောင့်လဲ? အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၊ ziazag ၅ခုအဖြစ်ထပ်မံခွဲထားသည့် ၅-လှိုင်း ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှုတစ်ခုရှိပါက၊ ဇယား၏ဤအစိတ်အပိုင်းအား အထူးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီသောနည်းလမ်းအချို့တွင် ပြင်ဆင်ချက်အဖြစ် ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ မည်သည့်အရောင်းအဝယ် လှုပ်ရှားမှုမှမလုပ်ခင် အတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန် တကယ်ကိုအရေးကြီးပါသည်။ ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုပြီးနောက် ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုရှိပြီး၊ မျှော်မှန်းထားသည့် တတိယလှိုင်း (သို့မဟုတ် လှိုင်း C)၏ လားရာဘေးတွင် အတက်လှိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပါက၊ ယခင်ရောက်ပြီးသား ပုံစံသည် အတည်ပြုပြီးသားဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။
ပြန့်ကားလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်း၏ သာဓကများ
နောက်ထပ်ဇယားတွင် ပြန့်ကားလာသော ဦးဆောင်(အထင်ကရ) ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုရှိပါသည်။ သင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ လှိုင်း ((v))သည် ပုံစံ၏အထက်ဘက်ကို မရောက်ရှိခဲ့ပါ။ ဒီလိုအနေအထားမျိုး မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည့်အတွက်၊ ပြန့်ကားလာသော ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခု၏ အဆုံးသတ်အား ၎င်း၏အထက်ဘက်တွင် မမျှော်မှန်းပါနှင့်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အခါအားလျှော်စွာဖြင့်၊ ပဉ္စမလှိုင်းသည် လှိုင်းတစ်နှင့် သုံးမှမျဉ်းကို ချိုးဖောက်နိုင်ပါသည်။ ဒါမျိုး ဖြစ်ခဲသည့်အတွက် ဒီအခြေအနေမျိုး၏ မှန်ကန်တဲ့ဥပမာမျိုးရှာရန် အချိန်အတော်ယူရပါသည်။ များသောအားဖြင့်၊ ဒါမျိုးသည် သတင်းအချို့ (သို့) နိုင်ငံရေးဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။ အောက်တွင် သင်တွေ့နိုင်သည့် ပြန့်ကားလာသော ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် Brexit သဘောတူညီချက်အကြောင်း ဗြိတိန်အစိုးရ၏ ရှည်လျှားသောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကာလအတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
အတွင်းဘက်တွင် အတက်တွန်းအားများနှင့် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းများ
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခု၏ လှိုင်းတစ်၊ သုံးနှင့် ငါးသည် အတက်တွန်အားများဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။ အောက်ပါဇယားကို တစ်ချက်ကြည့်ပါ။ လှိုင်း aတွင် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုရှိပြီး၊ ၎င်း၏ရွေ့လျှားလှိုင်းသည် အတက်တွန်းအားနှင့်တူသည်။
နောက်လာမည့်ဆောင်းပါးတွင် အဆုံးသတ် ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုကို စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပေမယ့်၊ ပုံစံနှစ်ခုကြားမှ အဓိကကွာခြားချက်ကို သင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါသည်။ အဆုံးသတ်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် ဈေးနှုန်းရွေ့လျှားမှုကိုအဆုံးသတ်ချိန်တွင် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းသည် ၎င်းကို ပြန်ကန်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤပုံစံသည် ရွေ့လျှားလှိုင်းများတွင် အတက်တွန်းအားနှင့်ကြီးထွားလာနေပါက၊ ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခု၏ ပဉ္စမလှိုင်းတွင် အဆုံးသတ်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုရှိရန်ဖြစ်နိုင်ပါသည် (အထက်ပါ ဇယားကိုကြည့်ပါ)။
ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခုသည် အတက်တွန်းအား (သို့) zigzagတစ်ခု၏ အစဖြစ်သည်။ ဤပုံစံသည် အမျိုးအစားနှစ်ခု: ၃-၃-၃-၃-၃ (ပိုအတွေ့များ) သို့မဟုတ် ၅-၃-၅-၃-၅ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုသည် ဦးဆောင်ထောင့်ဖြတ်မျဉ်းတစ်ခု၏ အဆုံးသတ်ပြီးနောက် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ဤပြင်ဆင်ချက်ပြီးနောက်တွင် လှိုင်းအရေအတွက်တစ်ခုလုံးပေါ်မူတည်ပြီး၊ zigzagတစ်ခု၏ လှိုင်း C၏ အတက်တွန်းအား၏ တတိယလှိုင်းကို မျှော်မှန်းနိုင်ပါသည်။
ပညာရေး forex ပညာပေးသင်ကြားရေး